Nhungamiro Inoshanda yeKunzwisisa Chinyorwa cheWiricheya Zviyereso
Ndiri kuenda kufanotaura neushingi. Yako isingaremi wiricheya yemawoko inenge 5 lbs HEAVIER kupfuura izvo zvinoiswa muhuremu hwakaburitswa nemugadziri mumabrochure aro. Heino yekukurumidza kuyedza iwe yaunogona kuita nerubatsiro rweanokwanisa muviri munhu. Itai kuti vazvirese vorekodha huremu.
Tevere ita kuti vazozviyera pamwe neiyo wiricheya. Bvisa zviyero zviviri uye iwe uwane iyo ZVINOITA uremu hwe wiricheya. Zvino tarisa pahuremu hwemugadziri weiyo isina kurema wheelchair. Ini ndinovimbisa kuti huremu hwakatemerwa hwomugadziri hunowedzera 5 lbs huremu kupfuura huremu hweCHOKWADI wawakasvika pakutanga!
Zvingadaro sei? Vangaenda sei nekusawirirana uku?
wiricheya zviyereso zvakakosha pakuita basa, kusimudzira, uye kutsigirwa nemari - chero chipi zvacho chingaita kuti mugadziri azivise nhamba diki inogoneka. Kubva pakuona kwekuita, chigaro chakareruka chiri nyore kufamba uye kutakura uchitenderera uchienzaniswa neanorema.
Kubva pane yekushambadzira uye yekutengesa maonero, akareruka ari nani, uye kana mugadziri A achikwanisa kudzikisa huremu hwakaderera pachigaro chayo zvichienzaniswa nemugadziri B's, ivo pasina mubvunzo vanokunda pamusoro pevashandisi vane kushambadzira kushambadzira.
Uye, kubva pakutsigira kutsigira kwemari, mugadziri anofanirwa kukoshesa huremu hwesachigaro mukati memari yemari kana ichida kubudirira pamusika mukuru. Naizvozvo, kune ese aya marudzi ezvinangwa, kushambadza huremu hurebvu hunobvumidzwa kunobatsira kune vagadziri.
Chaizvoizvo zvinogadzirwa zvinobva sei kurema kwekushambadza sezviri pachena pazasi peavo chaiwo michina inofamba ichitenderedza mune chaiko nyika?
Mhinduro kurongedza kwekugadzira. Iwe unoona, zvakanyanya wiricheya vashandisi vanoda 18 ″ -pese chigaro, gumbo zororo, mawrestrests, uye mabhureki, ZVISINEI Vagadziri HAVANZISE izvi zvinorema muzvigadzirwa zvavo zvekupedzisira.
Zororo remakumbo harina kumbobatanidzwa mune zviyero zvakaburitswa uye zviri approx 5lbs paavhareji. Aya ndiwo masachigaro ako anogona kuyera zvakaringana se5 lbs inorema kupfuura zvakadhindwa zvirevo. Kune mamwe mamodheru zvigaro zvinobvisirwa huremu zvinogona kutowedzera! Armrests uye mabhureki dzimwe nguva anotorerwa accounting yeimwezve 5lbs.
Dzimwe nguva kunyangwe mag mavhiri ayo akajairika mazuva ano kana achienzaniswa neakataura mavhiri anogona account yeimwe 2 lbs yekuwedzera huremu.
Vanochengetedza Kurema Makirasi
Vagadziri vari kuyambuka muganho wetsika neaya masimbi ekutsausa here?
Kune rimwe divi HERE nekuti ivo vari kutsikisa iwo "tekinoroji" mafekitori maererano nemaitiro ehurumende ekubhadhara mari. Parutivi rwunotevera, kana mutengi achipedzisa nechigaro icho chinosvika gumi nemaviri lbs chinorema kupfuura huremu hwakashambadzirwa hunogona kusiya kuravira kwakashata mumuromo wevatengi.
Kunyangwe paine zvimwe zvakakosha zvimwe kunze kwekurema kwe isina kurema wheelchair, inyaya yekuti inosvetuka kunze zvakanyanya uye kana mugadziri akagona kuenda kure ne "tekinoroji" kutumira huremu hwakaderera kwazvo, vanozo.
Kuti zviite kuti zvive zvakanaka, ZVESE nhamba dzinofanirwa kuburitswa, icho chinorema PASI uye PASINA zororo regumbo uye chero humwe huremu hunogona kuwedzera kuhuremu hwese hwechigaro. Rega mutengi aite chisarudzo chakazara ruzivo.
Iyo chete nzira yechokwadi yekuwana huremu chaihwo hwechigaro ndeyekupa iyo yekuyera kukwira nezvose zvinodiwa zvikamu. Tora iyo kutenderera uye uisimudze iwe pachako kana uchikwanisa kuzviita. Zvino iwe unoziva iyo "hunyengeri" yavanoshandisa, iwe uchave mutengi-ane ruzivo mutengi uye woita sarudzo yakanakira iwe.